ကြုံခဲ့မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြုံခဲ့မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး
Posted by ခင်ခ on Aug 11, 2012 in Creative Writing | 12 comments
မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းလေးကို တီချယ်ကြီး က “ ပျူပျူဌာဌာ လူတကာကို ´´ ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေးရေးတင်ထားတာကို ဖတ်မိပြီး ကျွန်တော်ကြုံခဲ့မိတဲ့အဖြစ် အပျက်လေး တစ်ခုကိုရေးပြချင်တာပါ။
တစ်ခါက မန်း အိုဒီယမ်တယ်ဟောက်စ် စားသောက်ဆိုင်မှာ ကျင်းပမည့် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတစ်ခုက ဖိတ်ကြားတာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အတူတွဲလို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ သတို့သား၏ ဖခင်နှင့် အလွန်ရင်းနှီးတာကြောင့် နောက်ကျပြီးသွားရင်ပြောနေအုံးမယ်ဆိုပြီး ဖိတ်စာထဲက ဧည့်ခံပွဲစတင်ကျင်းပချိန်ထက် ၁၀မိနစ်လောက်ဘဲနောက်ကျပြီးရောက်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ခန်းမရောက်တော့ သတို့သားအဖေက ခရီဦးကြိုပြုပြီး ခန်းမထဲကစားပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာနေရာပေးလို့ ၀င်ထိုင်လိုက်တာပေါ့၊ အဲဒီစားပွဲဝိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ထက်စောစွာရောက်နေ့တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်လည်းထိုင်နေတာပေါ့၊ သတို့သား၊ သတို့သမီးမလာရောက်သေး တာမို့ရောက်တဲ့သူတွေလည်း စောင့်နေစဲနှင့် ဧည့်ခံပွဲလာရောက်တဲ့သူတွေလည်း ၀င်လာမစဲဘဲပေါ့လေ။
ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တစ်စားပွဲတည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ သူတို့နဲ့ကျွန်တော်အကြည့်ချင်းဆုံတော့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကပြုံးပြတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြုံးပြပြီး ကျွန်တော် ဘယ်ကုမ္မဏီက အမည်ဘယ်သူပါလို့လဲ ပြောလို့ကျွန်တော် ကိုယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်စကားလည်းဆိုရော အဲဒီအမျိုးသား နှစ်ယောက် ထဲက ခုနပြုံးပြသူမဟုတ်တဲ့သူက လာကွာငါတို့ဟိုစားပွဲပြောင်းထိုင်ရအောင် ဆိုပြီးရုတ်ချည် ထပြောင်းသွားလို့ မိတ်ဆက်ရက်တန်းလန်းကြီး ကျွန်တော်မှာဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတယ်လေ၊ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ သဘောမျိုးနဲ့ အံသြနေတာပေါ့ ။ ဒါနဲ့ ခဏနေ သတိုးသား၊ သတိုးသမီး ရောက် စင်ပေါ်တက် ဘိသိက်စာဖတ်စသည်ဖြင့် ပြုဖွယ်ကိစ္စများအစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ကြပြီး စားသောက်စားပွဲများ ထံလိုက်လံနုတ်ဆက်နေစဉ် သတို့သား၏ဖခင် ကျွန်တော်တို့အနီးရောက်လာလို့ လက်ဆွဲပြီး ကပ်မေးကြည့်တော့ မှ ခုနထသွားတဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ကုမ္မဏီကဖြန့်ချီတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးစားတူ အမှတ်တံဆိပ် ကွဲတဲ့ ပြိုင်ဖက်ကုမ္မဏီကသူတွေဖြစ်နေလို့တဲ့လေ။ အမှန်ဆိုထသွားဖို့မလိုပါဘူး ဟုတ်ဘူးလား၊ ဘာတွေဖြန့်တာလဲ ၊ ဘာတွေလုပ်တာလဲ စသည်ဖြင့် အလာပ သလပ(ခေတ်စကား-ဖောရှော)လုပ်လိုက်ရင်ရတာဘဲဉ္စာ၊ သူတို့က ပြိုင်ဘက် ကုမ္မဏီကမှန်းလည်း ကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ အခုလိုတစ်ဝိုင်းတည်း မထိုင်ချင်ရအောင် အပြိုင်အဆိုင် သူနိုင်ငါနိုင်ပြုလုပ်ကြမယ့် လေလံပွဲတို့၊ တင်ဒါပွဲတို့ လာတက်တာလည်းမဟုတ်၊ လူမှု့ရေး မင်္ဂလာပွဲ လာတာဘဲလေ၊ ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်ကတော့ ကောက်ချက်ချမိလိုက်ပါတယ် သူတို့ဘဲသဘောထားမပြည့်တာလား၊ ကိုယ်ဘဲအလိုက်မသိ နုတ်ဆက်မိတာလားလို့——–။
( ဒီပိုစ့်လေးကအမှတ်မထင်ရေးဖြစ်သွားတာပါ၊ တီချယ်ကြီးအမေးကို အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်- ရိုသေလျှက် ကိုခင်ခ)
သူရို့ ဝိုင်းဘက်လှည့်ပြီး ပုဆိုး၁၀ခါလောက် ဝတ်ပြခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်
ပထမဆုံးကွန့်မန်းအတွက် ကျေးဇူးပါ၊ ပုဆိုးဝတ်ဖို့က တိုက်ပုံအင်္ကျီခံနေလို့ပါဗျာ။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ EQ တော်တော်လည်းနိမ့်နေရှာတာပဲ။
သူရိုင်းပေမဲ့ ကိုယ်က မသိချင်ဟန်ဆောင်နှိုင်ရင် သူရှုံးသွားတာပါပဲ။
အလိုက်မသိနှုတ်ဆက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေးကျေပွန်တာပါရှင်။
အော်သူတို့ ခမျာ တံဆိပ်တူတောင်လိုက်ထုတ်ပြီး တိုက်ခိုက်နေတော့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဝံ့ပေါ့
ကိုခင်ခရယ် စီးပွားရေးသမားယောင်္ကျားရင့်မကြီးက အဲဒီလိုအပြုအမူမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်း တော်တော်လေး အံ့ဖွယ်သုတပါပဲနော်…
မိန်းမစိတ်လို့ပြောရမယ် မိန်းမစိတ်တောင်မပြည့်ဝတဲ့မိန်းမစိတ်။ မိန်းကလေးတွေတောင်သူ့လောက်မဆိုးဘူး။
ရုပ်ပျက်လိုက်တာလွန်ရော။ မဟုတ်မှလွဲရော သူတို့ကုန်ပစ္စည်းက လေးခင်ခတို့ကန်ပနီကပစ္စည်းထက်အရည်အသွေးနိမ့်ပြီး ရောင်းအားကလည်း လေးခင်ခတို့လောက်မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အစ်မရေ…တစ်ခုလောက် ကွဲလွဲပါရစေနော်… မိန်းမစိတ် ဆိုလို့ပါ…. ရှေးအစဉ်အဆက်က လက်ခံလာခဲ့တဲ့ အယူအဆနဲ့ စကားဆိုတော့လည်း ပြန်ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်… အခုက ဘယ်လိုဖြစ်နေကြသလဲဆိုရင် တစ်ခုခု မကောင်းတာကို ပြောတော့မယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြီး ပြောကြပါတယ်။ “ယောက်ျားဆို ယောက်ျားစကားပြော” တို့၊ “မိန်းမလို မိန်းမရ မလုပ်နဲ့” တို့ဆိုတဲ့ စကားတွေကြားရင် ခံပြင်းမိတာ အမှန်ပါ။ ယုတ်စွအဆုံး လူတစ်ယောက်ကို ရုပ်ပြောင်ဆွဲချင်ရင်တောင်မှ မိန်းမပုံလုပ်ဆွဲကြတယ်။
တကယ်က စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ မိန်းမက မကောင်းဘူး၊ ယောက်ျားက မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူ့စိတ်က လူ့စိတ်ပါပဲ။ မွန်မွန်တို့ နိုင်ငံမှာပဲ သာဓကကြီးတစ်ခု ရှိပြီးသားမို့လား။
မွန်မွန့်စိတ်ထဲက အမြင်လေးကို ပြောလိုက်တာမို့လို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် အစ်မ….
လေးလေးခင်ခပြောတဲ့လူကတော့ တော်တော်ကို စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်..
comment ထပ်ပေးကြသော တီချယ်ကြီး ၊ဦးဦးပါလေရာ၊ အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ၊ Crystalline၊ မရွှေကြည် ၊ အလင်းဆက်တို့အားကျေးဇူးပါ။
ဒီလိုပါဘဲ လူ့ဘ၀မှာ လူအမျိုးစိတ် အထွေထွေပါဘဲလေ။
တီချာကြီးပိုစ့်မှာ မန့်ပြီးမှ ကိုခင်ခစာကို ဖတ်မိတော့…
(လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေဆိုသလို တချို့ကလည်း လူအချင်းချင်း ကြောသလိုလို မောသလိုလိုလေး လုပ်ရမှ ကျေနပ်တတ်သူတွေလည်း ရှိသေးတာမို့
ဦးဦးခင်ခ ဒါဆိုအဲဒီလူတွေနဲ့ supply chain management တွေလုပ်လို့ရပြီဗျ ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်